ပြန်လည်စတင် | Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, နိုဝင်ဘာလ 26, 2006 သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 24, 2014 Douglas Karr
ol '၏ဆောင်ပုဒ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်ပျင်းစရာကောင်းလာခြင်းကြောင့်လေကိုသတိကြီးစွာ ထား၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်။ ငါနှင့်အတူပယ်စတင်ခဲ့သည် ဖြန့်တယ် beta ကိုဆောင်ပုဒ်နှင့်လုံးဝကထွက်ညှိ။ ဂူဂဲလ်ဗွီဒီယိုဘားကိုတောင်ငါထပ်ထည့်သည်၊ ၎င်းသည်ဂူဂဲလ်ဗီဒီယိုမှကျပန်းအံဝင်ခွင်ကျရှာဖွေမှုများကိုပြုလုပ်သည်။ Seth Godin နှင့် Tom Peters အပြင်အခြား web အထွေထွေ tag များ၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း၊ အင်တာနက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းစသည်တို့ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ငါဒီစာအုပ်ကိုကြိုက်တယ်စာမျက်နှာက ဦး စားပေးသောကြောင့်။ menu sidebar (မည်သူမျှအမှန်တကယ်မသုံးဖူးသော) အစားဤအကြောင်းအရာသည်ထိုစာမျက်နှာကိုပင်မစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်သိုလှောင်ထားသည်။ အကယ်၍aည့်သည်တစ်ယောက်ရောက်လာပြီး post ကို“ အကျဉ်းချုပ်” ဖတ်ပြီးနောက်သူတို့စိတ်မ ၀ င်စားလျှင်၊ ငါနဲ့“ သက်ဆိုင်သော” စာမူများဘေးမှာရှိနေသည်။ အဲဒီမှာသူတို့ဖတ်ချင်တဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။
ငါကဲ့သို့ကောင်းစွာဆောင်ပုဒ်အချို့အေးမြနည်းနည်းအပြောင်းအလဲတချို့လုပ်ခဲ့တယ်။ Squible က set width ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် variable တစ်ခုအတွက် style အားလုံးကိုပြုပြင်ခဲ့တယ်။ Squible သည်ရှေ့စာမျက်နှာတွင်ရှိသည့်စာလုံးများကိုကန့်သတ်ထားသည်။ သို့သော် အကယ်၍ ၎င်းသည်အကန့်အသတ်ရှိပါကစကားလုံးနှစ်လုံးကိုဖြတ်တောက်သည်။ ငါ function ကိုကန့်သတ်မတိုင်မီနောက်ဆုံးအာကာသမှာကဖြတ်ဖို့ function ကိုပြုပြင်မွမ်းမံ။
နှင့်အညီ, သင်တန်း, မီးဂရပ်ဖစ်ရှိပါတယ်! ငါ့အရင်အခင်းအကျင်းရဲ့အပြာရောင်ထက်အနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းချင်ခဲ့တယ်။ ဘာတွေဖြစ်နေလဲကြည့်ရအောင် ငါဒီခေါင်းစဉ်မှာပျော့ပျောင်းနေသည့်အကြောင်းအရာကိုပြန်ဆိုသည့် Ajax အနည်းငယ်ပိုသုံးသည်ကိုအနည်းငယ်စိုးရိမ်သည်။ ကွန်ရက်စာမျက်နှာအသစ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုရလဒ်မည်သို့ဖြစ်ပျက်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရမည်။ နက်ရှိုင်းစွာဆက်စပ်သောတံဆိပ်ကပ်ခြင်းများအားလုံးသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော SEO (Search Engine Optimization) ကိုရရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
Tags: ဘလော့ဂ်douglas karrသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အလိုအလျောက်ပေါ်မှာWebsite စတင်ခြင်း
နိုဝင်ဘာလ 26 ရက် 2006 ခုနှစ် ညနေ 10:12 နာရီ
အမြင်သစ်တစ်ခု။ လိမ္မော်ရောင် ခေါင်းစီးသည် နံနက်စောစော ခံစားချက်ကို ပေးသည်၊ အလွန်သာယာသည်။
နိုဝင်ဘာလ 27 ရက် 2006 ခုနှစ် ညနေ 9:35 နာရီ
ဝိုး! တော်တော်လေး တိုးတက်လာတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းပြီး ရိုးရှင်းပါတယ်။ ကြော်ငြာမရှိဘူးလား
28:2006 pm မှာနိုဝင်ဘာ 10, 15
လှပသောအရောင်များ - အလွန်တက်ကြွ။ ဒါပေမယ့် စာမျက်နှာရဲ့ထိပ်က Douglas လေးကို လွမ်းမိကြောင်း ဝန်ခံရပါမယ် - ဒါဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ထိတွေ့မှုကို ပေးစွမ်းပါတယ်။